त्यसोभए तपाईले सोमोट्स नृत्य गर्न सक्नुहुन्न? फेरि सोच्नुहोस्, हामी जग्गा जस्तो चाल पार्यौँ।
मलाई किन माया छ डीजे जंगली स्लट। यो मेरो अन्तिम यात्रा आईबेफ-द मा फ्याकब्याकमा लिन्छ रोशनी, ठुलो बास, फोम मेरो फर धकेल्दै ... .. यदि तपाईं चमकदार र धेरै काम गर्न को लागी संवेदनशील हुनुहुन्छ भने मात्र यसलाई बचाउनुहोस्! यो स्लॉट नोफ्टीमा के हो? पागल 80s स्लॉट उजुरी हो।
जे भए पनि, स्लॉटको बारेमा कुरा गरौं, किनभने यो खेल पम्प गर्दैछ। यो एक psychedelic, एक खेल को उछाल बढाने लूट हो। हामीलाई मन पर्छ।, हामीलाई राम्रो लाग्छ!
डीजे जंगली विस्तार
डीजे जंगली स्लॉट तपाईं 170,000 सिक्किन्स सम्म जित्न सक्नुहुनेछ र डीजे वन्य प्रतीक विस्तार गर्दछ र पुनः स्पिन बोनस गेम ट्रिगर गर्दछ।
प्रत्येक पटक यो हिट हुन्छ, तपाइँले निःशुल्क स्पिन प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो जीतको लागि कुनै पनि प्रतीकको लागि खडा हुनेछ।
र त्यो तपाइँका कानहरूमा सङ्गीत हुनुपर्छ, यसको अर्थ अधिक जीत हुने सम्भावनाहरू। Bounty Hunt स्लॉट पछि हामीले उत्कृष्ट हिसाब सुविधा पायौं!
50,000 सिक्का ज्यापोट
डीजे जंगली यदि तपाईं जैकपोट जंगली बीच रील मा हिट, बुलबुले को खोलन को रूप मा खुले को रूप मा तपाईं डीजे वाइल्ड जैकपोट जी ​​जी र यो अधिक उत्तेजना प्राप्त गर्न को लागि समय हुनेछ!
यो भोल्युम अप गर्न र चारैतिर जम्प सुरु गर्न राम्रो समय हुनेछ!
डीजे जंगली बिल्लियों दुवै तरिका
तपाईं बायाँ उठ्न सक्नुहुन्छ दाँया र दाँया डीजे जंगली स्लॉटमा (रिल 1 मा प्रतीकबाट सुरु गर्न वा रिल5मा प्रतीक)।
djwild तपाईं डीजे वाइल्ड लाई तपाईंको स्टेटमेंट रणनीति को लागी ले सकते हो। के तपाईं आफैलाई एक स्मार्ट क्लबको रूपमा कल्पना गर्नुहुन्छ? Optimiser को प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्यालेन्सको% शर्त पर्खनेछ। वा5लगातार हानि पछि तपाईंको शर्त उठाउनाले लेवलको लागि जानुहोस्। वा यदि तपाइँलाई छिटो लेनमा जीवन बिताउनु भएको छ भने, प्रयास गर्नुहोस् बूस्टर सेटिङ जो तपाईंको bet 1 निशान हानि पछि उठ्छ जबसम्म तपाईं आफ्नो आधार शर्त भन्दा माथि4स्तर सम्म पुग्नुहुन्छ।
त्यसपछि त्यहाँ जम्पर छ कि एक जीत पछि आफ्नो शर्त बढ्छ। त्यसैले यदि तपाईं रोलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसको लागि जानुहोस्।
के यसले अर्थ बनाउँछ, वा के तपाइँ भ्रमित हुनुहुन्छ? हामी स्वीकार्न चाहन्छौँ कि हामी संग सुरु गर्न थियौ, यहां सम्म कि विमम्बट मस्तिष्क संघर्ष गर्नु थियो। केवल डेमो बाहिर परीक्षण गर्नुहोस् र जोखिम मुक्त निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस्। यो धेरै नजिक छ जस्तै तपाईं एक अधिक परम्परागत खेलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि क्वीन्स स्लटको रूपमा तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ विज्ञान हो
Dj Wild 10 Pay-Line गेमसँग 12 शर्त स्तर हो। खेल समायोजन गर्न र आफ्नो शर्त स्तरहरू बदल्नुहोस् (+ चिन्ह आइकनको साथ सिक्का, तल बायाँ)।
यस स्लॉटको बारेमा अर्को सुन्दर चीजहरू मध्ये एक, थम्बनेल ध्वनिको अलावा, बेशक, जंगलीहरू हुन्। तपाईले तपाईंको डीजे जंगली पाठ्यक्रम पाउनुभएको छ। हामीले उनको बारेमा कुरा गरेका छौं। तर तपाईं आफ्नो धूम्रपान को जंगली, तपाईंको कन्फेटी वाइल्ड्स, तपाईंको फायर वाइल्ड्स, तपाईंको स्ट्रोब वाइल्ड्स र तपाईंको लाजर वाइल्ड्स पनि पाउनुभयो। आह! तिनीहरू सबैसँग आफ्नै विशेष सुविधाहरू छन् (स्ट्रोब्स र लाजरहरू क्षैतिज रूपमा विस्तार गर्छन्)।
मोबाइल डीजे जंगली स्लॉट
डीजे जंगली स्लॉट सबै स्क्रिन आकारहरूको लागि अनुकूलित गरिएको छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो मोबाइल, ट्याब्लेट, तपाईंको ल्यापटप वा डेस्कटपमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, हामी भन्न चाहन्छौं कि यो फोनमा अझ राम्रो देखिन्छ डेस्कटपमा भन्दा भन्दा बढी। केवल यसलाई लोड गर्नुहोस्, भोल्युम अप गर्नुहोस् र पूर्ण स्क्रीनमा जानुहोस्
स्टर्लिंग चाँदी 3d
Dj wild अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 6, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 Dj wild
2.0.0.1 गोरखाको जेसस देवता
2.0.0.2 ज्याक ह्यामर
2.0.0.3 टेनिस ताराहरू
2.0.0.4 रसदार लूट
2.0.0.6 स्टर्लिंग चाँदी 3d
2.0.0.8 ट्रिपल जेब होल्डम पोकर